Ivenkile yeXiaomi e-UK iya kuvulwa ngo-Novemba 10 | I-Androidsis
UXiaomi wafika eYurophu kunyaka ophelileyo. KwakuseSpain apho uphawu oludumileyo lwaseTshayina lwavula iivenkile zalo zokuqala, into eqhubekile kulo nyaka. Kule ntwasahlobo, ifemu ivule iivenkile zayo zokuqala kwezinye iimarike eziphambili ezinje ngeFrance ne-Itali. Ngoku, balungiselela ukwenza umtsi baye kwenye intengiso ephambili kwilizwekazi elidala, njengoko kuvulwa ivenkile yabo yokuqala e-United Kingdom. Into eza kwenzeka kungekudala.
Iindaba eziza emva kokuba uphawu lwesiTshayina lubonakalise isiphelo salo esitsha, Umxube weXiaomi Mi 3, ngokusemthethweni kule veki. Sele sinomhla wokuvula wale venkile, ukongeza kwindawo yayo ethile.
Njengoko besesitshilo, ngekhe silinde ixesha elide ukuba le venkile yomenzi waseTshayina ivule iingcango zayo. Iya kuba nge-10 kaNovemba xa izakuvula ngokusemthethweni iingcango zayo Le venkile. Ke ngaphezulu nje kweeveki ezimbini ivenkile yokuqala yeXiaomi e-UK iya kuba semthethweni.
Indawo enye iya kuba kwiziko lokuthenga laseWest City eWestfield. Asinto ikhethwayo nje, kuba yenye yezona ndawo zaziwayo zokuthenga elizweni, nokuba yenye yezona zixakekileyo. Ke kuya kubakho abaphulaphuli abaninzi abakhoyo, yiyo loo nto uXiaomi ekhethe loo ndawo.
Elinye inyathelo kulwandiso lwaseYurophu lweshishini laseTshayina. Nangona abaninzi bekubona oku kuvulwa njenge inyathelo ngaphambi kokungena kwintengiso yaseMelika, Enye yeenjongo ezintle zikaXiaomi. Ke kuyakufuneka ukuba sijonge ukuba isicwangciso-qhinga sayo sivela njani kwiinyanga ezizayo.
Le venkile iya kuvulwa e-UK ngo-Novemba 10. Siza kubona ukuba kungekudala kukho amanye amazwe eYurophu apho umenzi othandwayo evula ivenkile, ukuqhubeka nokwandiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ivenkile yokuqala yeXiaomi e-UK sele inomhla wokuvula
I-Samsung Galaxy A6s, ifowuni entsha yaseMzantsi Korea engenziwanga ngokufanayo